Warshadda Shiinaha ayaa si toos ah u qiimeysa 30mm ss biibiile bir ah oo laba jibbaaran tube aan xuduud lahayn 100 × 100 warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Hongyi
Warshad si toos ah u qiimeysa 30mm ss biibiile bir ah oo laba jibbaaran tube aan xuduud lahayn 100 × 100
Tuubo bir ah oo laba jibbaaran waa nooc ka mid ah magaca dhuumaha laba jibbaaran, taas oo ah, biibiile bir ah oo dhererkiisu isku mid yahay.Waxaa laga sameeyaa bir bir ah ka dib marka la farsameeyo. Sawiridda biibiile laba jibbaaran: guud ahaan, birta xargaha waa mid aan la kala bixin, fidsan, duubneyn, lagu laabay tuubo wareegsan, ka dibna lagu rogo tuubbo laba jibbaaran tubbada wareegsan ka dibna lagu gooyo dhererka loo baahan yahay.
Kala soocida tuubada laba jibbaaran
1. Kala soocida nidaamka
Tuubo bir ah oo laba jibbaaran sida ku xusan habka wax soo saarka: tuubbo laba jibbaaran oo aan xuduud lahayn oo kulul, tubbo laba jibbaaran oo qabow leh
Tuubbada laba jibbaaran ee looxidhay ayaa loo qaybin karaa
(a) Nidaam ahaan: dhuumaha laba jibbaaran arc, alxanka caabbinta alxanka laba jibbaaran (jaangooyooyinka sarreeya, soo noqnoqodka hoose), tuubbada laba jibbaaran gaaska, tuubbada muraayadaha alxanka foornada.
(b) Sida ku xusan xariiqa alxanka - tollayn toosan tolkiis alxanka laba jibbaaran, muquuninta welded biibiile laba jibbaaran.
2. Kala soocida maaddada
Biibiile steel square Square sida ay wax ka: biibiile square steel steel, biibiile square steel daawaha.Common steel steel loo qaybiyaa: Q195, Q215, Q235, SS400, 20 # steel, 45 # steel, iwm steel daawaha u qaybsan Q345 , 16Mn, Q390, ST52-3, iwm.
JIS G3466-88 Jabaan guud ahaan qaabdhismeedka tuubada qaabdhismeedka tuubada ayaa la hirgelin karaa.
3. Kala soocista qaabka isku laaban
Tuubooyinka laba jibbaaran waxaa loo kala qaadaa qaab qayb ahaan
(2) Iskutallaab adag - qaybta tuubada laba jibbaaran: ubax - qaabab tuubo laba jibbaaran, oo furfuran - qaabeysan oo dhuumaaleysan, tuubbo jibaaran oo jiingado ah, tuubbo laba jibbaaran oo qaabeysan.
4. Kala soocida kala soocida daaweynta dusha sare
Biibiile steel Square sida ay daaweyn dusha: kulul galvanized biibiile laba jibbaaran, korantada galvanized biibiile square, saliid dahaarka leh biibiile square, pickling biibiile square.
Kala soocida ISTICMAALKA isku laaban
Tuubooyinka birta ah ee laba jibbaaran waxaa loo kala saaraa adeegsiga - tuubooyin laba jibbaaran oo loogu talagalay qurxinta, aaladaha mashiinka, warshadaha farsamada, warshadaha kiimikada, qaab dhismeedka birta, dhismaha markabka, baabuurta, birta iyo tiirarka, ujeeddo gaar ah.
5. Kala-soocidda kala-soocidda dhumucda darbiga
Tuubooyinka laba jibbaaran waxaa lagu kala saaraa dhumucda darbiga - super - qaro weyn - derbi, qaro weyn - derbi iyo qafiif - gidaar.
Cabir Cabbir 15 * 15-500 * 500mm
Dhumucda Darbiga 0.45-20mm
ZINC dahaarka leh 1) Pre-galvanized: Z60-200g / m2
2) Dhexdhexaad kulul galvanized: Z260-520g / m2
Waxyaabaha birta ah Q195 → Fasalka B, SS330, SPHC, S185
Q215 → Fasalka C, CS Nooca B, SS330, SPHC
Q235 → Fasalka D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2
Heerka BS1387, EN10297, BS6323, BSEN10217, GB / T13793-1992,
GB / T9711.1-99 iwm
Qaabka qaybta Wareeg / Barxad / afar gees
Nooca Tuuboyinka welded
Farsamo Cadaadiska Elektaroonigga ah (ERW)
Fusion elektaroonig ah (EFW)
Double quusin Arc Welded (DSAW)
Nooca Welded welded Longitudinal
Dhammaad 1) Bannaan
3) Mawduuc leh Xarig ama dabool
Dhammaan ilaaliyaha 1) Daboolka tuubbada caaga ah
2) Difaaca birta
Daaweynta dusha sare 1) Dhaawacmay
2) Midab Madoow (Dahaarka varnish)
4) Oo saliideysan
5) 3 PE, FBE, daxalka daahan u adkaysta
Kormeerka Imtixaanka Haydarooliga, Eddy Current, Imtixaanka infrared
Fasalka A cadaadiska baaritaanka 4.83MPa-13.10Mpa
Xirmo 1.Big weyn: Jumlad ahaan
2.Small OD: waxaa lagu dhejiyay silsilado bir ah
3. maro laba jibbaaran oo leh 7 slats
5.waxaa ikhtiyaar u ah macaamilka
Codsiga Qaab dhismeedka dhismaha, sameynta mashiinada, weelka, qaab dhismeedka hoolka, qorrax doonka, aagga saliida ee badda, iskuxirka badda, mootada mootada, qaab dhismeedka garoonka diyaaradaha, dhismaha markabka, dhuumaha gawaarida gawaarida ah iyo wixii la mid ah.
Gaarsiinta 1) Kunteenar
2) Gawaarida jumlada
Dekedda rarka Port Qingdao, Port Tianjin, Shiinaha
Taariikhda Gaarsiinta Marka loo eego Tirada iyo Qeexida Amar kasta
Isugeyn Naqshad gaar ah ayaa la heli karaa iyada oo loo eegayo shuruudaha
Ka-hor-tagga iyo kuleylka sare ee u adkaysta rinjiyeynta madow
Dhammaan habka wax soo saarka waxaa lagu sameeyaa hoosta ISO9001: 2000 si adag
Faahfaahinta tuubada laba jibbaaran
Hore: Xidho saxanka birta u adkaysta
Xiga: Liiska qiimaha tuubada birta ah ee leydilaka ah ee xirmada tuubada qaabeeya
Hot bir duudduuban wax dhismaha carbon madow ...
Sax High qabow barbaro sax tuuboyinka ...
Kuleyliyaha kuleyliyaha daawaha aluminium daawaha kaydka biibiile aan xuduud lahayn
Tuubbo bir ah oo bilaa bir ah oo kulul oo kulul oo duuban